We.com.mm - ထူးခြားတဲ့အလှတရားတွေနဲ့ ကမ္ဘာကျော်မော်ဒယ်ဖြစ်လာတဲ့ အာရှသူလေးများ
အခုဆိုရင် International မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလှအပစံနှုန်းတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း ပိုလက်တွေ့ကျလာပါပြီ။ Over-weight တွေ၊ Odd Beauty တွေကို မော်ဒယ်လောက၊ အနုပညာလောကမှာ နေရာပေးလာကြပါပြီ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အလှတရား အဆင့်အတန်းခွဲခြားမှုတွေ လျော့နည်းလာတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။
အခုဖော်ပြထားတဲ့ အာရှမော်ဒယ်တွေကတော့ အလှအပစံနှုန်းတွေကို ချိုးဖျက်ပြီး ကမ္ဘာကျော်လာသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ မပြောဘူးနော်။ ထူးခြားတဲ့ အလှတရားရှိတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်တော့မှ အားမငယ်ပါနဲ့။ သံသယမဖြစ်ပါနဲ့။ လုံလောက်တဲ့ အရပ်အမြင့်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ရှိရင် သင်ဟာ ကမ္ဘာကျော် မော်ဒယ်တစ်ယောက်တောင် ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
1.	Yoon Young Bae
Age	- 19
Native	- Daegu, South Korea
Height	- 5’ 9”1/2
သူမရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ အသည်းပုံမျက်နှာကျရယ်၊ မှဲ့ခြောက်လေးတွေရယ်၊ ဘယ်ဘက်ပါးပေါ်က မှဲ့တစ်စုံရယ်ပါ။ “ကျွန်မရဲ့ထူးခြားတဲ့အသွင်အပြင်ကို ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်မပျက်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီအရာတွေက ကျွန်မနဲ့ တစ်သားတည်းကျနေတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Age	- 30
Native	- Kowloon, Hong Kong
Height	- 5’ 5”
သူမဟာ Avatar လို၊ ကြောင်တစ်ကောင်လို ထူးခြားတဲ့ မျက်နှာအသွင်အပြင်ကြောင့် မော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတာပါ။ လှပသေးသွယ်တဲ့ကြောင်မျက်လုံး၊ ခေါင်းအုံးလို နူးညံ့အိစက်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူ၊ ထင်းထွက်နေတဲ့ မေးရိုးကားကား၊ ထူးခြားတဲ့ နှာတံ၊ မျက်နှာအနံှ့ လှပစွာ ပြန့်ကြဲနေတဲ့ အစက်အပျောက်လေးတွေက သူမရဲ့မျက်နှာကို ထူးခြားစေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူမက ဂီတကို အရင်စလုပ်တာပါ။ ဂီတသွေးဟာ သူမခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ စီးဆင်းနေတာမို့နောက်ပိုင်းလည်း ဂီတကိုပဲ ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ “တစ်ကိုယ်တည်း ကြီးပြင်းခဲ့ရတာကြောင့် ကျွန်မက စိတ်ဓာတ်အရမ်း ကြံ့ခိုင်ပါတယ်။ အချိန်တော်တော်များများမှာ ကျွန်မသာလျှင် ကျွန်မရဲ့ကမ္ဘာကြီးပါပဲ” တဲ့။
3.	Duan Meiyue
Age	- 20
Native	- Singapore
Height	- 5’ 10”
အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်း သူမရဲ့ရုပ်ရည်ဟာ ဘာဘီအရုပ်မတွေလို မျက်လုံးပြူပြူး၊ နှာတံချွန်ချွန်လေး မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း အခုသူမ ကမ္ဘာကျော် မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလေ။ “ကျွန်မ မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်မအရပ်ရှည်တာကြောင့် မော်ဒယ်လုပ်ဖို့ မကြာခဏပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မလည်း တွေးမိခဲ့တယ်။ ဘာလို့ကြိုးစားမကြည့်ရလဲပေါ့။” တဲ့။
4.	Tin Gao
Native	- Shanghai, China
မျက်လုံးနှစ်ဖက် ဝေးလွန်းပြီး မှေးစင်းနေတာရယ်၊ ထူးခြားတဲ့နှာတံနဲ့အတွဲအဆက်ညီနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလှလှလေးရယ်၊ သေးမျှင်လွန်းတဲ့ မျက်ခုံးတစ်စုံရယ်၊ ပါးလွန်းတဲ့ ဆံသားရယ်၊ ဆေးရေးပန်းချီလို အသားအရောင်ရယ်ကြောင့် ထူးခြားတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ပုံကို ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်က လန်ဒန်အခြေစိုက် Anti-Agency မှာတင်ရာကနေ လူသိများလာခဲ့တာပါ။ Anti-Agency ဆိုတာ ဖက်ရှင်နဲ့မော်ဒယ်လောကမှာ Odd Beauty လိုမျိုး သာမန်ထက်ထူးခြားတဲ့ အလှတရားတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
5.	Serena Motola
Native	- Tokyo, Japan
Height	- 5’ 5”1/2
သူမက အီတာလီယံ၊ အမေရိရန်၊ ဂျပန်ဖက်စပ် ကပြားမလေးပါ။ အခုဆိုရင်တော့ မော်ဒယ်ဖြစ်ရုံမက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နေပါပြီ။ သေးငယ်တဲ့ မျက်လုံး၊ သေးသွယ်တဲ့ နှာတံ၊ မှဲ့ခြောက်များစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သူမမျက်နှာလေးက တစ်မူထူးခြားပြီး လှနေတာပါပဲ။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ “ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်” ဖြစ်မှ မင်းသမီးတစ်ယောက်၊ မော်ဒယ်တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်တာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
6.	Xiao Wen Ju
Native	- Shaanxi, China
သူမရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ မျက်လုံးနှစ်ဖက် သိသိသာသာဝေးနေတာပါ။ မသိရင် ဂြိုလ်သားမျက်လုံးအတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း သူမဟာ L’Oreal ရဲ့ Face Model ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Vitoria’s Secret ရဲ့နတ်သမီးတစ်ပါးလည်း ဖြစ်လာပါသေးတယ်။
ဒါက ကမ္ဘာကျော် အာရှမော်ဒယ်တွေထဲက လက်လှမ်းမှီသလောက် ဖော်ပြထားတာပါ။ ဒီလိုထူးခြားတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ကမ္ဘာကျော်မော်ဒယ်ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ အလှတရားတိုင်းမှာ သူ့တန်ဖိုး၊ သူ့စံနှုန်းနဲ့သူ ရှိပါတယ်။ ဘာဘီရုပ်တစ်ရုပ်လို လှနေဖို့ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့အလှတရားကို မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုကိုယ် လက်ခံပြီး အားသာချက်အဖြစ် အသုံးချပါ။ နောက်ဆုံးမှာ သင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကပဲ သင့်ကိုပိုသန်မာလာအောင်၊ ပိုတိုးတက်လာအောင် လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ထားပါ။
ဒူးမားလွှတ်တော်ထဲမှအလှဆုံးအမျိုးသမီး နှင့် မြောက်ကိုရီးယားအာဏာဆက်ခံသူ
7 days ago by Gabriel
ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူးရာမှာ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အရည်သွေးကို ကြည့်ပြီး လက်ခံ ရိုက်ကူးပါတယ်ဆိုတဲ့ ဇဏ်ခီ
Dubsmash video တွေမှာ ကောင်မလေးတွေစကြွေခဲ့ရတဲ့ “Teejay”
မင်းသမီး Park shin Hye နဲ့ မင်းသား Choi Tae Joon တို့ရဲ့ Dating သတင်း